Isku aadka horyaalka Premier League oo si qarsoodi ah loo helay & kulamada ugu horreeya isbuuca koowaad. – Gool FM
Isku aadka horyaalka Premier League oo si qarsoodi ah loo helay & kulamada ugu horreeya isbuuca koowaad.
(England) 12 June 2019. Taageerayaasha horyaalka Premier League ayaa sugaya sameynta isku aadka horyaalka xilli ciyaareedka soo aadan kaas oo lagu dhawaaqi doono berito (Khamiis), balse saxaafada gudaha Ingiriiska ayaa soo helay nuqul xatooyo ah oo muujinaya isbuuca koowaad kulamada la ciyaarayo.
Durba waxaa baraha bulshada qabsaday sawirka aad hoos ka arki doontaan kaas oo la sheegay inuu yahay kulamada isbuuca ugu horreeya laga ciyaari doono Premier League, hadii xatooyadaas ay tahay mid si saxan ugu jirta jadwalka xiriirka FA-ga, maalinta koowaad xiiso weyn ma yeelan doono horyaalka.
Kulanka ugu soo horreeya horyaalka waxaa ciyaari doona Tottenham Hotspur iyo kooxda dib ugu soo laabatay horyaalka ee Norwich City, halka difaacdayaasha horyaalka ay la ciyaari doonaan Wolverhampton Wonderers, sidoo kale waxaa xiiso badan in macalinka xiga ee Blues uu kulankiisa ugu horreeya u safri doono St Merry isagoo la ciyaari doona Southampton.
Everton waxey noqon doontaa kooxda ugu horreysa ee la kulanta Newcastle United kadib iibkii milkiilayaasha carbeed, waxaana la filayaa in macalin weyn la keeno iyadoo Wenger iyo Mourinho lala xiriiriyay maalmahii lasoo dhaafay.
Liverpool oo dhibcahii ugu badnaa ebid keensatay fasalkii lasoo dhaafay, Burnley ayey la ciyaari doonaan kulanka ugu horreeya, waana kooxda noqotay horyaalka qaarada yurub.
Dhinaca kale Ole Gunnar iyo wiilashiisa waxey la ciyaari doonaan Brighton & Hove Albion, halka Gunners ay u safri doonto Selhurst Park (Crystal Palace).
F.G: Isku aadka horyaalka Premier League wuxuu si rasmi ah usoo bixi doonaa maalinta berito ah (Khamiis) xilliga hore wadanka Ingiriiska oo ku aadan barqanimada geeska Afrika.
Goolhayihii layaabka lahaa ee Colombia - Rene Higuita - oo sharad adag ku galay koobka koonfurta America - muxuu sameyn doonaa?